27th December 2017 by Barre Leave a Comment
Booliiska magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka ayaa sheegay inay ka hortageen Muuqaalo lagu xusayo haweenay cadaan ah oo uu dilay askari Soomaali ah, sawirkan oo la dhigay goobta dilka ka dhacay ayaa waxaa ka danbeeyey koox Cadaan cunsuriyiin ah oo doonaya inay ka faa’iideystaan dil uu geystay askari Soomaali ah oo ka tirsan booliiska Minneapolis.
15kii bishii July ee sanadkan ayuu Mohamed Nuur oo ah sarkaal ka tirsan Booliiska Minneapolis si kama ah ku dilay haweenay u dhalatay dalka Australia oo lagu magacaabo Justine Ruszczyk Damond.
Baaritaanka kiiskan ayaa socda iyadoo weli aan wax dacwad ah lagu soo oogin Mohamed Nuur oo isagu sheegay inuu haweenaydaasi toogtay kadib markii isaga iyo askarigii la socday ay naftooda u baqeen.
Haweenayda la toogtay oo ahayd cadaan ayaa la sheegay inay iyadu booliiska u yeertay kadib markii sheegtay in gurigeeda agtiisa uu ka dhacday fal danbiyeed, Mohamed Nuur iyo saaxiibkiis askari Matthew Harrity ayaa markii ay goobta gaareen waxay maqleen dhawaaq qarax kadibna waxay arkeen haweenaydan oo gaariga kusoo ordaysa, waa markaas marka uu xabada riday Maxamed Nuur isagoo toogtay haweenaydaasi isagoo gaariga ku dhex jira.
Kiiskan ayaa kusoo beegmay xili dalka Maraykanka ay ka taagneyd xiisad la xariirta dilalka ay askarta booliiska u geystaan dadka madow, balse cunsuriyiinta cadaanka oo iyagu inta badan si adag u difaaca askarta cadaanka ah ayaa doorbiday markan inay cambaareyn iyo eedeyn kala dul dhacaan askariga maadaama uu yahay Madow kasoo jeeda asal ahaan dalka Soomaaliya, uuna dilay haweenay cadaan ah.
Koox cunsuriyiin ah oo la baxay [Identify Evropa] saldhigoodana yahay gobalka Northern California ayaa Jimcihii Sawirka Haweenaydan iyo Shumacyo ka taagay goobta uu dilka ka dhacay si ay markale usoo nooleeyaan xiisada kiiskan. Ciidamada amaanka ee Minneapolis ayaa sheegay inay qaadeen sawirkaasi oo ay kooxdaasi dooneysay inay ka dhigto taalo ay dadka booqdaan, isla markaana sheegay inaan la ogolaan doonin falkan ay ku kaceen kooxdan cadaanka ah.
Waxaa weli taagan kiiska haweenaydan dhimatay iyadoo aan xeer illaalinta weli wax dacwad ah kusoo oogin askari Mohamed Nuur oo isagu diiday inuu wax wareysi ah siiyo xafiiska xeer illaalinta.
Mike Freeman oo ah Xeer illaalinta deegaanka Hennepin County ee Minneapolis ayaa sheegay in kiiskan uu adag yahay maadaama uu Mohamed Nuur diiday inuu hadlo xeer illaalinta ku adkaan doonto inay cadeyso in askarigan uu si bareer ah dilka u geystay ama inuu naftiisa u baqay xiliga ay toogashada dhacday.
Filed Under: Wararka, Wararka Caalamiga